Fanondranana andramena : ORINASA TSARALAZA NO TOMPON’NY SAMBO -
AccueilRaharaham-pirenenaFanondranana andramena : ORINASA TSARALAZA NO TOMPON’NY SAMBO
Hentitra ny fanambarana nataon’ny praiminisitra Mahafaly Olivier Solonandrasana taorian’ny fahatratrarana ny sambo “Lumina” nikasana hanondranana an-tsokosoko ireo andramena miisa 340. “Tsy tokony ho olom-bitsy no hisitraka ny harena sarobidy eto Madagasikara fa ny vahoaka malagasy. Misy ny toromarika nomena ny minisitra koa hisy ny fanapahan-kevitra horaisina raha voamarina fa misy mpiasam-panjakana tafiditra amin’izao tambazotra fanondranana andramena izao”, hoy ny praiminisitra.
Sira milanja 360 taonina no nentin’ity sambo “Lumina” ity niainga avy tany Antsiranana. Tokony ho nihazo an’i Mahajanga ny sambo araka ny fangatahana nataony (bon partance) kanefa nivily nihazo an’i Cap Masoala. Nanaitra ny manampahefana avy ao amin’ny “autorité maritime” izany. Fantatra taorian’ny fanadihadiana fa navelan’ireo ekipa nitondra ny sambo tany Vohémar ny sira milanja 325 taonina, ny ambiny 35 taonina sisa no nentiny nihazo an’i Cap Masoala. Lakana no nitaterana ireo andramena tao amin’ny sambo “Lumina” an’izany orinasa Tsaralaza izany.
Ny faha-4 Febroary no nahazoana ny vaovao ny amin’ny fisian’izao fikasana hanondrana andramena izao. Nidina tany an-toerana avy hatrany ny “unité spéciale mixte” avy amin’ny prezidansa sy ny primatiora. Naharitra ora roa ny fifanjevoana teo amin’ireo iraka manokana avy amin’ny fitondrana sy ny ekipa avy tamin’ny sambo “Lumina”. Marihana fa andramena efa voageja tany Vinanivao ireto mbola nokasaina haondrana an-tsokosoko ireto.
Voatazona ao Toamasina avokoa ny ekipa nitondra ity sambo ity izay miisa 12. Nambaran’ny praiminisitra Olivier Mahafaly Solonandrasana àry fa “ho tafapetraka tsy ho ela ny “tribunal spécial” kanefa tsy hiandry izany fa tsy maintsy hisy rafitra izay tsy maintsy atao ao anatin’ny lalàna hitsara ireo olona 12 ireo. Tsy misy zavatra afenina fa ao anatin’ny mangarahara no anaovana ny Fitsarana ka ho hita amin’izay ny ao ambadik’io raharaha io”.